एमाले-काँग्रेस मिलेर सरकार बनाउने कसरत सुरु, दोस्रो बैठकको मिति तय ! अब के हाेला ?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच हुने भनिएको पार्टी एकताले अन्तिम रुप ग्रहण गर्न सकेको छैन ।
स्थिर सरकार र पार्टी एकता मुख्य नारा लिएर चुनावमा होमिएका दुबै पार्टीले सन्तोषजनक परिणाम पनि हात पारेका थिए । तर, जसरी सबै नेता एक स्वरका साथ चुनावमा गएका थिए त्यो चुनावपछि हुन सकेको छैन ।
त्यसको माओवादी नेताहरुले विरोध गर्दै नेतृत्व आलोपालो वा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भएमात्रै एकता गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । पार्टी एकता र नयाँ सरकारबारे छलफल गर्न ओली र प्रचण्डबीच चुनावपछि दुई पटक छलफल भएको छ । तर, कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । एमाले र माकेभित्रको विवादलाई नजिकबाट नियालीरहेको नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दै अाएको छ । काँग्रेसले माके र मधेसी दलहरुलाई सहभागी गराएर सरकार गठनको पहल पनि गरिरहेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनको लागि प्रचण्ड केन्द्र भागमा छन् । उनलाई एमाले र काँग्रेसले आफूतिर तान्ने विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । चुनावमा पार्टी एकताको नारा दिएका कारण एमाले र माकेलाई नैतिक दवाव परिरहेको छ । यसैबीच काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठनको प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार बुधबार साँझ एमाले र काँग्रेसको युवा नेताहरुले दरवार मार्गको एक होटलमा उक्त छलफल गरेका हुन् । पहिलो चरणमा नेतृत्वमा देखिएको तिक्तता घटाउने र विश्वासको वातावरण तयार गर्ने, त्यसपछि नेतृत्व तहमै वार्ता र संवाद गराउने सहमति भएको छ ।
विशेष गरी अाफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेदेखि नै काँग्रेससँग एमाले चिठिएको हो । त्यो कुरा पनि छलफलमा उठेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्‍ने देउवाभन्दा प्रचण्डको बढी हात भएको काँग्रेस नेताहरुले बताएका थिए । दुबै पार्टीका युवा नेताहरुको छलफल राम्रो भएको र शुक्रबार फेरि दोस्रो बैठक बस्ने मिति पनि तय भएको छ ।
दुबै पार्टीका अा-अाफ्नै संका र चिन्ताको फाइदा काँग्रेसले नउठाउला भन्न सकिदैन । बुधबारको बैठक फेरि बस्ने वातवरण बनेमा एमाले-माके एकतामा झन् दरार ल्याउनेछ । तर दुबै पार्टी एकदमै सतर्क छन् । अाफ्नो कारणले एकता प्रक्रिया रोकिएको भन्‍ने कार्यकर्ता र मतदातालाई दुबै पार्टीले देखाउन चाहेका छैनन् । माथि नेताहरुबीच विवाद जारी रहेपनि स्थानीय स्तरमा दुबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुबीच बढेको सहकार्यले भने निकै दवाव परेको छ । अनलाइन डबलीबाट